Archive du 20180605
Minisitra teo aloha “Aza avela handositra any ivelany”
Rava iny ny governemanta, efa tafajoro ny Fitsarana ambony na ny HCJ (Haute Cour de Justice).
Minisiteran’ny tanora sy ny fanatanjahantena Mangataka minisitra teknisianina ny Sendikan’ny mpiasa
Nanomboka omaly ihany koa ny grevin’ny mpiasan’ny minisiteran’ny tanora sy ny fanatanjahantena eny Ambohijatovo.
Guy Maxime Ralaiseheno « Tara loatra ny fialan’i Mahafaly Solonandrasana »
Tara loatra ny fialan’ny praiministra Solonandrasana Olivier teo amin’ny toerany, raha araka ny fanehoan-kevitra nataon’Atoa Guy Maxime omaly.
« Commission electorale Football » vaovao Mbola halefa any amin’ny FIFA
Nankatoavin’ny maro an’isan’ireo ligim-paritry ny baolina kitra niisa 19 nanatrika ny AGE nataon’ny FMF teny amin’ny Paon d’Or Mandrosoa Ivato tamin’ny sabotsy 02 jona 2018 teo ny tolokevitra misy an’ireo anaran’ny mpikambana 5 ao amin’ny “Commision electorale Football” vaovao dia Atoa isany :
Tafita amin’ny dingan’ny 1/4-dalan’ny fifaninanana tenisy Roland-Garros eo amin’ny sokajy lehilahy ilay Espagnol Rafael Nadal rehefa nandresy an’i Maximilian Marterer (6-3, 6-2, 7-6).
Politika tokoa no atao ka sarotra ny tsy halaim-panahy hanakatra ny ao ambadiky ny tian-kambaran’ireo mpisehatra vaventy anatin’izy ity. Sehatra avo lenta izany politika izany, hoy ireo manampahaizana ary tsy ho iva lenta na oviana hatrany ihany koa ny fanapahan-kevitra mivoaka.
Tanjon’ny fampandrosoana holovain-jafy Ahiana hatrany ny tsy ahatrarana azy
Manoloana ny fitohizan’ny krizy politika eto Madagasikara dia hita ho manindry mafy ny sehatra iraisam-pirenena, indrindra amin’izao fahataran’ny firenena Malagasy amin’ny fampandrosoana izao.
“Alliance pour l’industrialisation” Hiasa ho tombontsoan’ny orinasa Malagasy
Omaly alatsinainy 4 jona no natao tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina ny fikaonan-dohan’ireo mpikambana ao amin’ny “alliance pour l’industrialisation” nahitana ny mpikaroka amin’ny lafiny ara-toekana CREM (Cercle de Reflexion des Economistes de Madagascar), ny FIVMPAMA (FIVondronan’ny MPAndraharaha MAlagasy) ary ny SIM (Syndicat des Industries de Madagascar).
Mandrahona ny mponina ao Andranofotsy-Maroantsetra ny hanao fitsaram-bahoaka ny Ben’ny tanàna ao an-toerana.